Umaki: imithombo ye-infographics | Martech Zone
Maka: imithombo ye-infographics
I-infographics yokumaketha ibe ngumthombo wokunakwa okukhulu kweMartech. Kakhulu kangangokuthi sengisethe izexwayiso zeGoogle ze-infographic term futhi ngizihlaziya usuku lonke. Njengoba i-infographics idume kakhulu, imboni yokuqukethwe ikhungathekile nge-infographics embi… ngakho-ke sikhetha okuhle ngalokho esabelana ngakho noma esingakwabelani ngakho ukuqinisekisa ukuthi sihlala sinikeza inani. Iyini i-infographic Basics? Izizathu eziyi-10 okufanele zibe yi-infographics
Namuhla ntambama ngimenywe esidlweni sasemini esihle kakhulu nengxoxo ne-Indiana Business College Harrison College. I-Indiana yaziwa kakhulu ngokuba nezinye zezikole ezinhle kakhulu ezweni, nasemhlabeni, kepha abantu baseHarrison bayaqaphela ukuthi sisezweni eliguquka ngokushesha. Benza i-push enolaka ukuqinisekisa ukuthi bazohlala phambili kwejika. Ngesikhathi sikhuluma, ngabona ukuthi kunethuluzi elilodwa elikhanyayo
Enye yezinzuzo (abanye abantu bacabanga ukuthi kuyisiqalekiso) ukuba umlutha wobuchwepheshe, i-savvy, ukuthi wonke umuntu uhlala ekucela usizo. Umngani wami omuhle noHoosier engikanye naye, uPatric aka Mnu Noobie, ukulungele ngokuphelele ukususa lo mthwalo emahlombe akho! UPatric ube newebhusayithi ekhulayo, uNoobie, ngonyaka odlule kodwa ukwakheka okusha nokwethulwe kabusha kuyamangalisa! INoobie, Inc. ine-glossary, umsindo nevidiyo